Inqubomgomo yobumfihlo | Data Recovery
Home → Inqubomgomo yobumfihlo
Inqubomgomo yemfihlo LC Technology
Zethu lab yokutakula idatha kwakha indawo elondekile ngayo yonke idatha yekhasimende igcinwa iyimfihlo futhi elawulwa ukufinyelela laboratory ukuqinisekisa Ochwepheshe ezifanele kuphela ukuphatha ulwazi olubucayi. Sihlale izinkontileka ukuze alulame idatha bahlukanisa ngoba uhulumeni, abomthetho nezinhlangano ezizimele. LC Technology ojwayele ezingeni ubumfihlo nesivikelo oluthathwa izinto ezidinga. Wonke amadokhumenti walulama esula unaphakade ngemuva 30 izinsuku.
injongo: isitatimende Inqubomgomo yobumfihlo LC Technology International yabhalelwa njengesiqondiso imniningwane eqoqwayo kusukela abasebenzisi kanye nendlela esisebenzisa ngayo lolo lwazi. Sinomuzwa lokhu kuyokwenza ukuba wenze isinqumo ufundile futhi ukhululekile ulwazi supply kithi. Uma unemibuzo imibono noma ukukhathazeka ukujabulisa usazise at Service@LC-Tech.com.
nolwazi lokubala ubuningi babantu kanye siqu isicelo thina
Ubani sihlanganyela ukwaziswa
Izibalo Tracking: LC Technology usebenza 4 Amasayithi isandla, www.LC-Tech.com, www.LC-Tech.co.uk, www.FILERECOVERY.com futhi www.PHOTORECOVERY.us Wonke amasayithi uqaphe izibalo. amasayithi ethu ukusebenzisa analytics amasevisi ethungatha njenge-Google Analytics Bing Analytics.
Lawa masevisi izibalo kithi ezifana emakhasini abhekwa, babhekwe esingakanani, Iseshini isikhathi nezinye izibalo. Lolu lwazi lusetshenziselwa ngaphakathi kuphela ukuphatha umuzwa ongcono womsebenzisi.
Asazi ukushicilela noma kunjalo ukwenza izibalo zethu zomphakathi.
Kungenzeka, kuhla isikhathi ukuthi izivakashi eziningi noma akushaye indawo yethu iye kusingathwe ngesikhathi esinikeziwe, kodwa akukho ulwazi oluthile ku-ngabanye IP ikhishwe. Lokhu isetshenziselwa Izibalo zabantu lesifunda kuphela futhi hhayi elondolozwe, noma wabelane.
Asazi HHAYI ukuthengisa idatha yethu kunoma ubani — ke isetshenziswa kuphela ngaphakathi.
Amakhukhi: Sisebenzisa amakhukhi e-e-commerce endaweni indawo yethu. Amakhukhi zisetshenziselwa ukulandelela okuqukethwe inqola nithenga futhi esimisweni ukuthenga. Amakhukhi zisetshenziselwa yokugcwalisa usizo amafomu ngokuzenzakalelayo. Amakhukhi ungathumeli yiluphi ulwazi futhi yisikhathi ezinsukwini ezimbalwa.
Ukubalwa kwabantu, kanye Nolwazi Siqu Thina Cela: Sicela ulwazi lomuntu siqu ezindaweni eziningana website yethu; lapho Awamademo alandwa, Imininingwane iyadingeka, imikhiqizo uthenge, technical support liceliwe noma ukubhalisa newsletter yethu iyadingeka. Kanye ngolwazi lomuntu siqu, thina futhi acele ulwazi oluyisisekelo kwedemografikhi kanye / noma incazelo yenkinga nivuna. Zonke uhlu lwamakheli ziyavunywa futhi umsebenzisi kungaba ohlweni nganoma isiphi isikhathi ngokuthumela ie-mail Unsubscribe@LC-Tech.com ukuba ngokushesha asuswe.
Siyisebenzisa kanjani Imininingwane eqoqwe: Noma yiluphi ulwazi oluqoqwe kwi website yethu, ukuthi sithunyelwe ngumsebenzisi noma eqoqwe yiseva izibalo isetshenziswa ngokuqinile e-indlu ukuhlaziywa kwedemografikhi, umkhiqizo ngcono futhi ithuthukiswa isipiliyoni umsebenzisi. Sinawo ephuma nyanga zonke okuyinto opt-in nge-Imeyili. Senza ugaxekile noma inqwaba e-Mail izipesheli noma ukukhangisa futhi asazi sithengise noma sisabalalise uhlu lwethu kunoma abantu wesithathu noma izinkampani.
Sigcina lonke ulwazi kuyimfihlo.
Ubani Sabelana Ngemininingwane Nge: I zangaphandle kuphela uneminye ukufinyelela ulwazi mayelana namakhasimende yethu Okokuqala Data Corporation ngokusebenzisa yabo E4 Global Gateway credit card ukucutshungulwa lomasango, kanye PayPal, Umugqa futhi SanDisk® Corporation. Imininingwane ithunyelwa E4 Global Gateway, PayPal noma Umugqa kuphela uma ikhasimende kwenza ukuthenga futhi sisebenzisa evikelekile kuthengiselana lomasango. Okokuqala Data Corporation (E4 Global Gateway sika Umzali Inkampani) ingenye ngobukhulu izilimi credit card emhlabeni futhi usebenza 34 amazwe emhlabeni jikelele. Ungahlola ulwazi lwabo lapha. Idatha Okokuqala uye ngamazwi eliqinisekisiwe awahlanganyeli ulwazi kanye ukuthi kuphambene inqubomgomo ikhadi issuers, okuyinto ayikuvumeli ukuba wabelane ulwazi lokukhokha. LC Technology awukwazi emuva inqubomgomo ngu E4 Global Gateway noma Data Okokuqala. Imininingwane ithunyelwa SanDisk® Corporation kuphela uma ikhasimende uthenge SanDisk® RescuePRO® ngokuqondile www.LC-Tech.com. SanDisk® Corporation ingenye abakhiqizi elikhulu futhi abanikezeli bemikhiqizo flash isitoreji ikhadi ezihlukahlukene imikhiqizo electronic kanye namadivayisi digital. LC Technology International awukwazi emuva inqubomgomo ngu SanDisk® Corporation.
Yini amalungelo Ungakwazi yini ukushintsha idatha yakho:
Uma ungumsebenzisi obhalisile noma ube imibono kwesokunxele kusayithi lethu ungacela ukubona noma ukulanda idatha esinalo ngawe. Njengoba LC-Tech.com akuthathi amazwana, noma ube abasebenzisi ababhalisiwe, ngeke sibe ulwazi balolu hlobo ukuze isivakashi ukuba thwebula. Ulwazi kuphela besizoba kungaba ulwazi olunikeziwe kusukela ukugcwaliswa ifomu yesicelo kokuhlaziywa isofthiwe, ifomu isicelo sokuxhaswa, noma ifomu lokuxhumana.
Ngokuvamile izivakashi eziye ugcwalise ifomu, idatha lizoba ikheli lakhe le-imeyili, iyiphi IP eliyifa lawo ngesikhathi ugcwalisa ifomu kanye ejenti yomsebenzisi izintambo iziphequluli ayesebenzisa. Ezinye izindaba zika-idatha yomphakathi njengoba enyatheliswa izivakashi.
Ukuze ukukhokha amakhasimende, lokhu ayohlanganisa ulwazi lephrofayela kanye thwebula, yokukhokha, futhi ithikithi ukwesekwa imilando.
*** Ungase futhi ucele "zilibaleke 'futhi siyoba ukusula noma iyiphi idatha okhonjwa esinalo ngawe.
Kunjalo, le datha kungafaki sidinga izinjongo zokuphatha noma ukuphepha noma into uma kudingwa ngumthetho ukuba agcine enye idatha.
Nokho, uma ikhasimende nokukhokha neyethu, futhi unelayisensi isofthiwe esiye ebhaliswe nathi, uma thina susa wena database yethu, thina ngeke bakwazi ukubheka kuwe kuze database yethu ukuze bakwazi ukukusiza technical support, yokuvuselela ilayisensi, noma ezinye izinto. Ngakho, siza ucabangele ukuthi uma ucela ukususwa database yethu.
Okwamanje isikhathi, lokhu kusebenza izivakashi zethu ezivela ku-European Union, ngokuhambisana Jikelele Data Protection Regulation (GDPR).
Ngaphezu kwalokho, kusukela ngomhla ka-Januwari 1, 2020, lokhu kuzosebenza esanda zamisa Inqubomgomo Mthetho California Umthengi.
Sizokwenza ukushintsha lo okwengeziwe esikhathini esizayo esiseduze.
Umuntu ofuna ukuthola, noma ubani usuke efuna ukulungisa, ukuchibiyela, noma ukususa idatha olungalungile, kufanele iqondise wakhe / nombuzo wakhe ukuze support@lc-tech.com.
Sizophendula kungakapheli isikhathi esibekiwe ezinengqondo, not to exceed one week.
Okwamanje isikhathi, lokhu kusebenza izivakashi zethu ezivela ku-European Union, ngokuhambisana Jikelele Data Protection Regulation (GDPR), futhi kusukela ngo-January 1, 2020, futhi California abahlali persuant kuya Inqubomgomo Mthetho California Umthengi.
Yini Idatha Breach Izinqubo Sinetikhungo:
Kufanele noma yimuphi umcimbi kwenzeka lapho idatha yekhasimende lulahlekile, Stolen, noma engase ebucayini, inqubomgomo yethu eyokwazisa amakhasimende ethu nge-imeyili kungakapheli 48 amahora ithimba lethu iqaphela umcimbi. Sizophinda futhi sibike sehlakalo kunoma yokuvikela idatha kanye nokugunyazwa okudingekile. Sizosebenza eduze amakhasimende abathintekayo ukunquma ezilandelayo ezifana izaziso umsebenzisi, futhi indlela yokugwema noma yimuphi umcimbi efanayo esikhathini esizayo.
Insizakalo yekhasimende – Service@LC-Tech.com
Khansela okubhaliselwe – Unsubscribe@LC-Tech.com
Ucingo Nathi – yamahhala (866) 603-2195
FirstData Imininingwane – Chofoza lapha